समाचार – Allindiabc
चर्चित अभिनेता अजय देवगणले बनाए कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल
May 8, 2021 May 8, 2021 adminLeaveaComment on चर्चित अभिनेता अजय देवगणले बनाए कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल
एजेन्सी । भारतमा कोरोना महामारीका रुपमा फैलिएपछि बलिउड कलाकारहरु पनि सहयोगका लागि अगाडी आउन थालेका छन् । अभिनेता अजय देवगणले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि कोभिड सेन्टर संचालन गरेका छन् । जसमा अक्सिजन भेण्टिलेटर सहितको ब्यवस्था गरेर संक्रमितको उपचार गरिन्छ । उनको यो कामको भारतमा निकै प्रशसंसा भएपछि अभियानमा आनन्द पण्डित पनि जोडिएका छन् । भारतका […]
काठमाडौं बासीका लागि जरूरी सुचना
May 7, 2021 May 8, 2021 adminLeaveaComment on काठमाडौं बासीका लागि जरूरी सुचना
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाभाइरसका चार हजार १०६ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा उपत्यकाका तीन जिल्लामा चार हजार १०६ सङ्क्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा तीन हजार ८९, भक्तपुरमा ३७४ र ललितपुरमा ६४३ जना गरी चार हजार १०६ नयाँ सङ्क्रमितको पहिचान गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार […]
नेपालमा कोरोना संक्रमणमा नयाँ रेकर्ड
May 7, 2021 adminLeaveaComment on नेपालमा कोरोना संक्रमणमा नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । बिहिबार नेपालमा हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा कोरोना भाइरसका बिरामी थपिएका छन् । देशभर २० हजार ३६६ जनाको पीसीआर परिक्षण गर्दा ८ हजार ९७० जनामा र ७७५ जनाको एन्टीजेन परिक्षण गर्दा १०० जनामा गरी ९ हजार ७० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ३ लाख ६८ हजार […]
९१ पत्रकारमा पनि कोरोना सङ्क्रमण
May 7, 2021 adminLeaveaComment on ९१ पत्रकारमा पनि कोरोना सङ्क्रमण
काठमाडाै। नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रतिष्ठान प्रदेशअन्तर्गत ९१ पत्रकार सङ्क्रमित भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रतिष्ठान प्रदेशले ३३ प्रतिष्ठान शाखासहित ४८ विभिन्न सञ्चार गृहका अध्यक्ष र पत्रकारसँग गरिएको टेलिफोन वार्तामा १९ प्रतिष्ठान शाखासहित २५ सञ्चार गृहका ९१ पत्रकारमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो। प्रतिष्ठान प्रदेशका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले प्रतिष्ठान प्रदेशबाट निर्वाचित एक केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश समितिका एक […]
खर्बपति बिल गेट्स दम्पतीले सम्बन्ध विच्छेदको गरे घोषणा, छुट्टिनुको कारण यस्तो देखाउदै लेखे यस्तो स्टाटस !
May 4, 2021 May 7, 2021 adminLeaveaComment on खर्बपति बिल गेट्स दम्पतीले सम्बन्ध विच्छेदको गरे घोषणा, छुट्टिनुको कारण यस्तो देखाउदै लेखे यस्तो स्टाटस !
एजेन्सी – विश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनी माइक्रोसफ्टका मालिक तथा विश्वकै धनि व्यक्ति मध्येका एक हुन् बिल गेट्स । उनको ब्यापारको बारेमा त हामीले थुपै खबरहरु सुन्दै आइरहेका छौं । तर, आज हामी उनको निजी जीवनको बारेमा चर्चा गर्दैछौं । खर्बपति बिल गेट्स दम्पतीले सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेको छ । बिल र मेलिन्डा गेट्सले सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा […]
May 4, 2021 adminLeaveaComment on पिकनिकमा महिलाले खिचिन् छोराको फोटो, घर आएर फोटो हेर्दा सातोपुत्लो उड्यो
[ad_1] एजेन्सी। इङ्ल्याण्ड नजिकै नर्थम्बरल्याण्डकी एक महिला विगत केही दिनदेखि सुत्न सकिरहेकी छैनन् । उनको हो सह वास उ डेको छ । उसलाई यस्तो हुनुको कारण पनि निकै खास छ । यी महिलाले पिकनिकमा आफ्नो छोराको फोटो खिचेकी थिइन् तर उनले त्यो फोटो पछि हेर्दा त्यहाँ एउटा ड रला ग्दो अनुहार देखिन् । यही कारण […]
धनुषा, कञ्चनपुर, हुम्ला र नवलपुरमा निशेधाज्ञा
May 4, 2021 adminLeaveaComment on धनुषा, कञ्चनपुर, हुम्ला र नवलपुरमा निशेधाज्ञा
जनकपुरधाम। कोराना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले आजदेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाका अनुसार बिहान ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। वैशाख ३१ गतेसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञा अवधिमा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको जनाइएको छ। कञ्चनपुर– जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले निषेधाज्ञाको […]
बागलुङमा काेराेना सङ्क्रमित जनप्रतिनिधिको मृत्यु
May 4, 2021 adminLeaveaComment on बागलुङमा काेराेना सङ्क्रमित जनप्रतिनिधिको मृत्यु
बागलुङ । बागलुङमा कोरोना सङ्क्रमित एक महिलाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको ताराखोलागाउँपालिकाका ३० वर्षीया जनप्रतिनिधि महिलाको उपचारका क्रममा गए राति धवलागिरि अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि अस्पताल आएकी उनको वैशाख १९ गते गरिएको जाँचमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। अस्पतालको सघन उपचारकक्षमा राखेर उनको उपचार भइरहेको थियो। श्वासप्रश्वासकै समस्याका कारण उनको मृत्यु […]
May 4, 2021 adminLeaveaComment on मुलुकमा पहिलो अभ्यास : विपद्को पुनःस्थापन अनुदान वितरण शुरु
काठमाडौँ। मुलुकमा पहिलो अभ्यासस्वरुप कार्यविधि नै तयार पारी मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनका लागि सरकारले अनुदान दिन थालेको छ। विपद्बाट प्रभावित परिवारको घर पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट रु २० करोड रकम प्राप्त भएको र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन शुरु गरिएको जनाइएको छ। पहिलो चरणमा आवश्यक […]
विश्वमा काेराेना : अमेरिका, भारत र ब्राजिलमा संक्रमितकाे ४४ प्रतिशत
May 4, 2021 adminLeaveaComment on विश्वमा काेराेना : अमेरिका, भारत र ब्राजिलमा संक्रमितकाे ४४ प्रतिशत
काठमाडौं। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ करोड नाघेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा थपिएका ३ लाख ५५ हजार ८ सय २८ सहित कारोना संक्रमित हुनेको संख्या २ करोड नाघेको हो। अमेरिका, भारत र ब्राजिलमा विश्वमा संक्रमित भएकाे संख्याकाे ४४.२६ प्रतिशत रहेकाे छ। थपिएको संख्यासहित भारतमा २ करोड २ लाख ७५ हजार ५ सय ४३ जनामा कोरोना […]